डा. गोपाल दहितले १० दिनमा के काम गरे ? यी हुन् प्रमुख काम [भिडियो] – Tharuwan.com
डा. गोपाल दहितले १० दिनमा के काम गरे ? यी हुन् प्रमुख काम [भिडियो]
June 9, 2017 June 13, 2017 admin
नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका सांसद एवं पूर्व भूमिसुाधर तथा व्यवस्थामन्त्री डा. गोपाल दहितले चार वर्षमा हुन नसकेको काम आफूले दस दिनमा गरेर देखाएको बताएका छन् ।
राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले कमलरीहरुको परिचय पत्र वितरणका लागि दस दिनभित्रै निर्देशिका जारी गरेको बताए । यसले मुक्त गरिएका थारु समुदायका १२ हजार कमलरीलाई फाइदा पुग्ने उनले बताए । ‘कमलरीहरुको परिचय पत्र फाइन विभिन्न बहानामा विगत चार वर्षदेखि अड्काइएको थियो । मैले उक्त फाइल झिकाएर दस दिनमै निर्देशिका जारी गरेको छ,’ उनले भने ।
उनले कमैया, हलियाको लागि पनि विभिन्न काम दस दिनमै पूरा गरेको बताए । यसले अगामी दिनमा बजेट विनियोजनलगायतका कुरा सहयोग पुग्ने बताए । ‘मैले छोटो समयमै बोक्रा निकाल्ने काम गरेको छु । आशा छ अगामी दिनमा त्यो कामले पूर्णता पाउने छ,’ उनले भने ।
29छुटाउनु भयो कि राजनीति
दंगीशरणमा घन्कियो थारु चुनावी गीत
एपीएफलाई केएनपीको उपाधि, सरस्वती चौधरी बेस्ट प्लेयर घोषित